Airbus A32x FD-FMC v1.55 ụgbọelu: enweghị ndepụta nke SID / STAR na FMC
Airbus A32x FD-FMC v1.55 ụgbọelu: enweghị ndepụta nke SID / STAR na FMC 2 afọ 8 ọnwa gara aga #814
M biputere ajụjụ a n'ihi na enweghị m ike isi na nsogbu pụta ọtụtụ ụbọchị.
Nsogbu m: mgbe etinyere Project Airbus A32x FD-FMC v1_55 (ngwanrọ ebudatara na library.avisim.net) mgbe m bidoro ngwa ahụ P3D_v4 ụgbọ elu nwere atụmatụ ụgbọ elu na-akwụghị ụgwọ sitere na Nice-Côte d'Azur na London Heathrow, na mgbe ebidobido injin na FMC enweghị m ndepụta SID / STAR na ntụgharị FMC adịghị arụ ọrụ.
- kemgbe ọnwa 2 agara m FSX Mpempe ọla edo ka P3D v4; Etinyegolarị m ihe omume a nke Airbus FSX enweghị nsogbu ma ọ na-arụ ọrụ nkịtị;
- tupu ịkwaga na P3D Ewepụrụ m FSX na nkem addons;
- mgbe nwụnye nke P3D Akpọghachiri m ya FSX (ewezuga Acceleration) iji weghachi ụgbọ elu dị FSX mana abiaghi na P3D, na enweghị nsogbu;
- M weghachite ma jiri A320 Familly Mega mkpọ si Rikoooo, enweghị nsogbu;
- M ebudatara Project Airbus A32x v1_55 ma wụnye ya na ntuziaka nwụnye (ntuziaka ntuziaka maka P3D v4); Achọpụtara m ụfọdụ ọdịiche dị n’etiti ntuziaka nwụnye na osisi ngwanro
§5: Etinyere XMLTools3D.dll n'ime C \_ Programs \_ Lockheed_Martin \_ Prepar3D_v4
§5: Emepụtara m folda "Modules" na C \_ Programs \_ Lockheed_Martin \_ Prepar3D_v4 ebe m zigide LoggerX.dll
§7: FD-FMC_database.kmz faịlụ adịghị na folda FD_FMC kamakwa na FD_FMC Doc & Manuals; M depụtaghachiri ya na faịlụ FD-FMC;
§7: faịlụ FMC_Path.ini na-efu site na v1.55, ya mere agbapụtawo m FMC_Path.ini site na v1.0 gara aga ma depụta ya n'ime folda FD_FMC
§8.2: DLL.xml faịlụ dị na C \_ ProgramData \_ Lockheed Martin \_ Prepar3D_v4; M tinye nkọwapụta abụọ akọwapụtara (XMLTools na LoggerX); megidere ihe egosipụtara M na-eche ma faili a dị na folda nke P3D dika egosiputara;
- Mgbe m kwụsịrị ụgbọ elu m, ezutere m nsogbu ahụ
- Ejiri m Project Airbus A32x 1_55 si FSX (echichi bụ akpaka); M zutere nsogbu 2 iji mara na-egosighi na ↑ 5 na enweghị FMC na ↑ 7; na m edozi ya site na ịwụnye FSX Ọsọ ọsọ; wee banye ụgbọ elu Nice> London nke SID / STAR rụrụ ọrụ nke ọma.
Enwekwara ntụnye nke nwere ike ịdị mkpa, ya bụ na mgbe m jiri FSX Enwere m ozi nchekwa ịnabata XMLTools.dll dị ka faịlị nchekwa na ngwanrọ ntụkwasị obi, ozi nchekwa enweghị m mgbe m jiri P3Dv4.
Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịgwa m otu m ga-esi banye ajọ ọnọdụ a P3D v4, m ga-ekele m nke ukwuu.
Oge ike page: 0.205 sekọnd